Nkọwa: Nchịkọta, Versiondị, na Handoff Ngwaahịa Gị | Martech Zone
Anyị na ụlọ ọrụ mba na-arụ ọrụ ugbu a ịzụlite omenala Ahịa Cloud email ndebiri maka ngalaba na ngalaba azụmahịa. Ebe ọ bụ na ndị ọ bụla, ndị ọrụ ngo, na ndị na-emepụta ihe niile dịpụrụ adịpụ, onye nrụpụta ahụ mepụtara njakịrị ya ma soro ndị otu ndu ya rụọ ọrụ na nsụgharị - wee nyefee ya ndị otu anyị maka nzaghachi na ntinye.
Onye mmebe ahụ mere ka m mata Abstract. nkịtị bụ ngwa mmekorita n'ịntanetị maka Mac ebe ụlọ ọrụ gị, ndị ọrụ ngo, na ndị ahịa nwere ike ijikwa, mbipute, na nhazi akwụkwọ n'otu ebe.
Isi nke Abstract
Iji dezie ma ọ bụ mepụta faịlụ imepụta, ịkwesịrị budata ngwa desktọọpụ macOS. Kọrọ na-enweta nzaghachi, na desktọọpụ ngwa synchronized na Ngwa weebụ nke Abstract.
Usoro ntinye nke Abstract
Abstract na-enyere ndị otu gị aka ịrụ ọrụ site na nna ukwu, ngalaba, rụkọta ọrụ, nye nzaghachi n'ụzọ niile iji kwadebe atụmatụ ngwaahịa gị akwadoro maka nrụpụta.
Import - mbubata Eke na Adobe XD faịlụ ma mepụta ebe etiti maka ọrụ imewe gị kachasị ọhụrụ yana akwụkwọ nkwado.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ - Bido nyocha site na ịmepụta ngalaba nke nna ukwu iji mepụta ebe ọrụ yiri ya. Alaka bụ nchekwa ebe gị na ndị ọzọ na-emepụta nwere ike ịrụ ọrụ na otu faịlụ n'otu oge, na-enweghị overwriting onye ọ bụla ọrụ ma ọ bụ na-emetụta nna ukwu.
Kwe - Akwụkwọ na chekwaa ọrụ gị site na mgbakwunye agbakwunyere, iwu ụlọ ka ị na-aga. Gụnyere ndetu banyere ihe ị mere na ihe kpatara ya bụ akụkụ nke ịchekwa ọrụ gị na Abstract.
nzaghachi - Rịọ nzaghachi sitere n'aka ndị nrụpụta ndị ọzọ na ndị metụtara ya, ozugbo ọrụ ahụ. Edere nkọwa na nkọwapụta na mbadamba ihe maka nkọwa dị mfe.
version - Mgbe a kwadoro atụmatụ ma dị njikere ịga n'ihu, nzọụkwụ ọzọ bụ ijikọ, ma ọ bụ tinye, mgbanwe gị n'ime nna ukwu. Nwere ike iji ụdị nsụgharị dị iche iche tụnyere ụdị mgbanwe ị chọrọ ịchekwa iji masị gị na ndị ị na-achọghị. Ma, ọ bụrụ na ị gbanwee obi gị ma ọ bụ mehiere, ị nwere ike ịlaghachi na nsụgharị mbụ.
Production - Transition ọrụ site na imewe ka mmepe ozugbo si Abstract. Ndị mmepe nwere ike ịtụle mgbanwe, lelee nha, ma budata akụ - niile site na njikọ. Ohere inweta ihe nlere bu ihe ha choro (ma obu n’efu).
Abstract na-enye onyinye oge niile ma na-enye onyinye.
Bido Nnwale Abstract 14-Day Tọ oge Enterprise Abstract Demo
Tags: nkịtịadobe xddesignimewe nzaghachiihe ngosiimepụta ngwaahịanzaghachi ngwaahịaEkeuiui nzaghachinjirimara interface interfacenjikwa njikwa